SAWIRO:-Madaxweyne Laftagareen Oo Ka Qaybgalay Munaasabada Tacadiyada Ka Dhanka Ah Haweenka Soomaaliyeed | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta SAWIRO:-Madaxweyne Laftagareen Oo Ka Qaybgalay Munaasabada Tacadiyada Ka Dhanka Ah Haweenka...
SAWIRO:-Madaxweyne Laftagareen Oo Ka Qaybgalay Munaasabada Tacadiyada Ka Dhanka Ah Haweenka Soomaaliyeed
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftigareen) Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed somaliya oo manta ka qeyb galay Munaasabad ku saabsanayd Tacdiyada ka dhanka ah haweenka Somaliyeed .
Xaflada waxa kaloo goobjoog ka ahaa gadoomiyah barlmanka konfur galbeed waziirada haweenka mamulka iyo qaybaha gala duwan ee bulshada
Abwaan Maki xaaji banaadir ayaa ka mid ahaa dadkii lagu cazuumay xafladan
Intii ay socotay xaflada waxa goobta lagu soo bandhigay heeso iyo majaaliyo ku saabsan tacdiyada haweenka .
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed mudana Cabdicasis xasan maxamed (Laftigareen ) oo ka hadalya xaflad ayaa balan qaaday in mamulkiisa dadal ku bixin doono in haweenka deeganadan sa siin doono xuquuq dooda
Sanado badan oo ay socdeen dagaal kuwaas oo Soomaaliya ka dhigay dal aan lahayn dowlad dhexe, haweenka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay hormuud ka noqonayaan aayaha dalka iyaga oo sare u qaadaya nolosha boqollaal qof.
Iyaga oo u maraya barnaamijyadooda haddii ay ahaan lahaayeen kuwo yar iyo kuwa waaweynba, iyaga oo ah xirfadleyaal, haweenka ganacsatada, siyaasiyiin ama dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa waxa ay saameynayaan isla markana horumarinayaan nolosha bulsho muddo sanado ah la daala-dhacayay colaad, saboolnimo iyo abaar. Sheekooyinkan sawir ahaan oo qayb ka ah taxane ayaa lagu maamuusayo qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo caqabado badan u soo maray si ay u horumariyaan dalkooda iyo bulshadooda.
In kastoo ay jiraan caqabado, waxaa ay xiriir xooggan la sameysay hoggaamiyeyaasha maxalliga ah iyo hay’adaha kale si loo joojiyo xadgudubka loo geysto haweenka iyo gabdhaha. Balse kaliya ma aha dadka aasaasay hay’ado ama shirkado dadka saameynta ku leh bulshada Soomaaliyeed.
Dhanka kale haweenka Soomaaliyeed eek u nool Dalka Maraykanka waa laf dhabarta bulshada. Waxayna dhiggood uga horreeyaan dhan walba, hadday aqoon tahay, hadday siyaasad tahay iyo hadday ganacsi tahayba.
Soomaalida maraykanka waxa la oddorasaa in ay leeyihiin in ka badan 650 ganacsi, 80% ganacsiyadaa cidda lahaanshahoodi lehi waa haween. Sida oo kale tirada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka qalin beddesha cidda ugu badan ee ka baxdaa waa hablo soomaaliyeed, kolka loo eego wiilasha.